Ezinye izinto zokwazisa |
Iimbasa kunye neeMallallions
Iiplastiki zePensile ezithambileyo zePVC
Iingqekembe zeSilicone zemali kunye neengxowa zeSilicone
Iibhokisi zeepensile kunye neepensile
Abanini beZiselo zeNeoprene / iNeoprene Koozie / Ngaba iyaphola / Ngaba iKoozie
Amaqhosha esitshixo kunye neeFobs eziphambili
Ngombulelo kwinkxaso yemizi-mveliso enendawo yokuvelisa ngaphezulu kwe-64,000 yeemitha zesikwere kunye nangaphezulu kwama-2500 abasebenzi abanamava kunye nesityalo esizenzekelayo sokwenza electroplating kunye noomatshini bokuhambisa umbala woqweqwe lwawo, siyabadlula abo sikhuphisana nabo ngokusebenza okuphezulu, ingcali, ukunyaniseka kunye nomgangatho ophezulu wemveliso, ngakumbi ubuninzi obufunekayo kungekudala okanye uyilo olunzima lufuna abasebenzi abanamava. Ukuzinikezela kulawulo olungqongqo lomgangatho kunye nenkonzo yabathengi enolwazelelelo, abasebenzi bethu abanamava bahlala bekhona ukuze baxoxe ngeemfuno zakho kunye nokuqinisekisa ngokwaneliseka kwabathengi.
Ikhethekileyo kuzo zonke iintlobo zamabhanti esiqhelo esiko
Izipho ezi-Shiny ezintle ezikhethekileyo kuzo zonke iintlobo zamabhanti esiko kubandakanya neebhande zesilicone, iibhanti zentsimbi zempama, amabhanti e-PVC athambileyo, isongo sebhanti yensimbi, ii-lanyard slap wristbands, ii-wristbands, iirholithi zewoshi, iintsimbi zentsimbi ezingenasici, iibhanti zewayini ezilahlwayo ze-PVC, ii-silicone mosq ...
ngomphathi ku 21-10-07
Umbulelo lixesha elihle lokuba nombulelo kunye nokuxabisa onakho kunye nento oyizuzayo. Lixesha lokuba iintsapho zidibane, zimanyane kwakhona, zihlale kunye kwaye zonwabe kunye, kwaye zabelane ngolonwabo kunye nosizi, ngamanye amaxesha kuphela kwithuba lonyaka. Ngaphambi kosuku lokubulela, abantu ...
Ihowuliseyili yeTrolley Token kunye neCaddy Coin Keychains
Ingqekembe yeCaddy ekwabizwa ngokuba yingqekembe yetroli, isetyenziselwa ukubuyisela ingqekembe yenyani kwivenkile enkulu, kwindawo yokuthamba okanye kwenye indawo, ngakumbi kumazwe aseYurophu nakwimakethi yase-US. Ubungakanani obahlukeneyo kunye nobukhulu ziyafumaneka ngokweemali ezahlukeneyo zelizwe kubandakanya i-Euro, isiJamani, isiFrentshi, iDu ...
Iifayile zePocket Pocket Makeup
Ngaba ujonge into yokwazisa okanye izipho ezintle zamantombazana okanye zamanenekazi? Esinye sezipho zethu ezintle-zefashoni ye-acrylic kunye nesipili sokwenza izipili kuya kuba yinto elungileyo kuwe. Isipili esithandekayo nesithambileyo sepokotho singenziwa ngezinto ezahlukeneyo kubandakanya isinyithi, i-zinc al ...
IiArmbands zezeMidlalo kunye neNgxowa yesinqe
Ngaba uyayithanda imidlalo yangaphandle? Ngaba ukhathazekile ngokungabinayo indawo yokugcina ifowuni yakho ephathekayo okanye izinto ezixabisekileyo ngelixa uzilolonga? Imikhono yethu yemidlalo yefashoni kunye nebhegi esinqeni ngokuqinisekileyo iya kusombulula iiphazili zakho, kwaye ungaze ube namava okungazi ukuba uyibeka phi iselfowuni okanye enye into yobuqu ...
Yenza ubuGcisa ngezinto zoKwenziwa kweenkuni
Ngaba ujonge indlela eco-friendly yokuphucula ukunyusa kwakho? Ngaba uyayidinga imveliso yokwazisa eyenziwe kwizixhobo zendalo ukuze uzisebenzise njengezinikezelo okanye uphakamise uphawu lwakho? Kwaye ukuba unenkxalabo malunga nokususa inkunkuma yeplastiki kwimeko-bume yehlabathi, izinto zokwazisa ngomthi ...
Oonobumba abahlukeneyo abaSebenzayo
Izipho eziMnandi eziMenyezelayo zinganikezeli nje ngepini, i-medallion, ii-patches, i-lanyard, kodwa ikwazi ukuvelisa zonke iintlobo zeekepusi ezinjenge-Beret yasemkhosini, ikepusi yenkonzo, ikepusi ebuyela umva, i-visor yelanga yezemidlalo, iminqwazi ye-foam yomoya, ikepusi yokukhuthaza, umnqwazi woboya , ii-caps ze-silicone zokubhukuda, ii-caps ze-EVA, ukusebenza ha ...
Ungaqaphela ukuba kuyatshisa kwaye kuyatshisa ehlotyeni, kuyabanda kwaye kuyabanda ebusika. Ukukhuselwa kwendalo esiba yimfuneko. Kunye nabantu kwisicelo sokhuselo lokusingqongileyo ngaphezulu nangaphezulu, ngokufanelekileyo, izinto ezinokubakho ezinokuboliswa ziintsholongwane ngumkhwa. Ngaphandle kwe ...
Izixhobo zoLungiso lwaMakhaya kunye nokuSebenza
Ngexesha elinzima lexesha le-COVID-19, yintoni esinokuyenza ukuzikhusela thina kunye nabantu esibathandayo? Ngaphandle kokunxiba imaski yobuso xa uphuma kwaye uhlamba izandla rhoqo, yenza umthambo ngakumbi kwaye ukonyuse amajoni ethu omzimba iya kuba lolunye ukhetho olufanelekileyo. Nangona kunjalo, abantu banendawo encinci kwaye baxhotyiswa ngokomzimba ...
Isikhumba siyimveliso yendalo enamawaka eminyaka eyimbali. Ifele eyenziwe ngento yesikhumbuzo ikhangeleka intle kwaye ayikhe iphume ngesitayile, ke ngoko isikhumba yinto efanelekileyo yokusebenzela iimfuno zangoku kwaye zilungele izinto zezipho zentengiso eziphezulu. Izipho ezi-Shiny ezintle zinokubonelela ngeendlela ezahlukeneyo ...
Izipho Day kaTata
Uthando lukaTata lunobubele, lunyanisekile, luthobekile, lunomonde, luzincamile kwaye aluguquguquki. Ukunika into ekhethekileyo ngoMhla kaTata njengesipho yenye yeendlela ezifanelekileyo zokubonisa ukuba umxabisa kangakanani ebomini bakho. Awunazimvo malunga notata abathanda njengezipho? Kungcono ukwazi umdla wakhe kuqala, i ...
Umsebenzi omninzi wokutyhala i-Pop Bubble
Push pop to bubble toys bahlala kwimarike ngokukhawuleza xa sele ithengisiwe, kwaye ngoku iba yenye yeendlela ezixhaphakileyo ngo-2021. Kutheni ithandwa kangaka? Okokuqala, iithoyi zebhabhi ze-fidget zenziwe nge-100% yezinto ezikhuselekileyo ze-silicone, ezinokuphinda zisebenze kwaye zihlambeke. Ayiyityhefu kwaye ayibangeli monakalo ebantwini okanye kwizilwanyana zasekhaya ....